Rivotra iray an'ny mpakafy rongony tokana tokana
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets ao an-dakozia / WOWOW Matte Black Mixer Mixer Tap
naoty 5.00 avy tany 5 mifototra amin'ny 3 mpanjifa naoty
(3 mpanjifa famerenana)
Ny baoty mainty avo be miaro ny felatan'ny rantsantanana sy ny rano ary mahatonga ny lakozia ho madio kokoa.
Drafitra fanaovana kiraro vita amin'ny kiraro avo-tap Matte Black EVE-0071, mahatonga ny lakozia anao ho mora kokoa, mora mifanentana amin'ny ankamaroan'ireo milentika. Ny halavan'ny hosotra 20 santimetatra dia mety hahatratra ny halavany kokoa, ka mahatonga ny asa andavan'andro ho mora kokoa. Tsotra ny fametrahana, ary ny vokatra dia nandalo ny fanamarinana NSF 61-9, miaro ny fiarovana sy ny fahasalamanao ary miantoka fa saika tsy misy famotsorana mitarika mandritra ny fampiasana. Ny kiraro vita amin'ny hoso-doko hosodoko dia mamela anao hamongotra haingana ny kalsioma voa sy voanio maimaim-poana sy mora nefa tsy mampiasa masinina simika.
SKU: 2310301B Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets ao an-dakozia Tags: Fitaovana savoka an-dakozia, Varahina mihetsika, Spout Swivel
Havoana tokana na lavaka telo-tendrombohitra
Misy ny tahan'ny vola
1.8 Galona isaky ny Minitra
Faucet ao an-dakozia, takelaka fanaovana takelaka, kojakoja mitaingina
Fantatra fotsiny! Tiako ny mainty matte toa tsara miaraka amin'ny tampon-kaoninay. Ireo torolàlana momba ny fametrahana dia nisy sary miloko izay mora azo. Tsy nametraka faucet mihitsy aho fa tsy nanana olana, tsy nisy fivoahana! Gaga be ny vadiko fa vitako izany nefa tsy nisy fanampiana.
Mivoaka haingana be ny rano. Ny loha azo esorina dia mandeha tsara ka tsy mino aho fa niandry ela aho nanoloana ilay faucet efa misy.
Nahagaga ny vidiny. Tsy hiala nenina amin'ity fividianana ity ianao !!
Faly be aho amin'ity faucet ity raha jerena ny vidiny lafo. Tena mora ny fametrahana ary tonga ny faucet miaraka amin'izay ilaina amin'ny fametrahana. misy fantsona lava halavany ho an'ny sprayer ary ny lanjany mitazona azy tsara. Tsara raha misy andriamby eo anelanelan'ny sprayer sy ny vatany faucet fa mijanona eo amin'ny toerany izy na rahoviana naverina. Hanoro hevitra izany amin'ny namako aho.
E *** O2021-05-13
Tiako ny fitiavana tia ity faucet ity! Mora be ny nametraka azy, 5 minitra fotsiny no nanesorako ilay faucet taloha. Ny ampahany sarotra indrindra apetraka dia ny fanesorana ilay teo aloha. Mazava ny lalana, tiako fa misy ohatra amin'ny dingana tsirairay. Nohavaozina avy hatrany ny lakozia ary tena faly aho amin'ity fividianana ity! Tena mora vidy, toa kalitao, tiako ny farany matte. Tandremo, ny dian-tanana dia hita kokoa nefa voafafa mora foana. Tonga amina fonosana tsara sy taloha kokoa noho ny nandrasana izany. Tsy misy zavatra ratsy holazaina momba an'ity vokatra ity, efa nanolotra roa hafa aho ary samy nividy azy.
WOWOW Top Rated High Arc Single tantanana borosy ...
Fangam-baravarankely Chrome WOWOW Sink Faucet miaraka amin'ny fanonganana ...
Ny rindrina WOWOW dia natsofoka teo amin'ny Nickel nopotehina